Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas Tourism Charting New Agụmakwụkwọ
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem ụgbọ mmiri Bahamas dị n'oge ọdịda na udu mmiri
N'okpuru isiokwu a "Charting New Course in the Future Development of Global Tourism - Gaanụ n'ihu, gaa n'ihu, gaa n'ihu, ọnụ," ndị isi ụlọ ọrụ Bahamas Tourism & Aviation Ministry zutere ndị otu ahịa na azụmaahịa nke nzukọ ahụ iji kpaa maka ọdịnihu nke njem. ụlọ ọrụ dị na Bahamas na ọrụ dị mkpa nke otu ahụ na-arụ.
Otu ihe omume mebere gbakọtara ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị si n'ofe Bahamas Tourist Office na ndị na-abata ahịa.
Ndị bịara ya bụ ndị otu mịnịstrị na-ahụ maka njem na njem ụgbọelu na Nassau, tinyekwara ndị ahịa na ire ahịa mba ụwa niile nọchitere anya ahịa na New York, Atlanta, Florida, Houston, Toronto, Europe na Latin America.
Nzukọ a "ga-abụ ihe ndekọ dị ka otu n'ime nzukọ dị mkpa nke ahịa anyị."
Mịnịsta nke njem na njem ụgbọelu, bụ Hon. Dionisio D'Aguilar; Odeakwụkwọ Omeiwu, Maazị Travis Robinson; Odee akwụkwọ na-adịgide adịgide, Maazị Reginald Saunders; Director General nke Ministry of Tourism, Oriakụ Joy Jibrilu na osote Director General, Maazị Ellison "Tommy" Thompson, sonyeere Executive Director nke Global Sales, Oriaku Bridgette King, maka mmemme ụbọchị atọ nke gbakọtara njem nlegharị anya ndị ọkachamara si n'ofe ụlọ ọrụ ndị njem Bahamas na ndị na-abata na ndị otu ahịa. Emere ihe omume a na June 30 - July 2, 2021.
Mịnịsta nke njem na njem ụgbọelu, bụ Hon. Dionisio D'Aguilar, gosipụtara na nzukọ a "ga-edekọ dị ka otu n'ime nnọkọ kachasị mkpa nke ahịa anyị na akụkọ 50 afọ na nzukọ anyị."
Ndị bịara ya bụ ndị otu mịnịstrị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ụgbọelu dị na Nassau, yana ndị otu na-azụ ahịa na azụmaahịa na-anọchite anya nnukwu ahịa na New York, Atlanta, Florida, Houston, Toronto, Europe na Latin America